Translations < Myanmar < LimeSurvey 3.x.x < GlotPress
Translation of LimeSurvey 3.x.x: Myanmar
We recommend you to export the entire survey from the main administration screen before deleting it.	 ဤစစ်တမ်းအား မဖျက်မီ ပင်မ စီမံခံခွဲရေး Admin စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ပြီး စစ်တမ်းတစ်ခုလုံးအား Export ပြုလုပ်ထားရန် အကြံပြုပါသည်။	 Details
ဤစစ်တမ်းအား မဖျက်မီ ပင်မ စီမံခံခွဲရေး Admin စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ပြီး စစ်တမ်းတစ်ခုလုံးအား Export ပြုလုပ်ထားရန် အကြံပြုပါသည်။
2020-10-20 12:19:09 GMT
This process will delete this survey and all its corresponding groups, questions, subquestions, answers, and conditions.	 ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် ဤစစ်တမ်းနှင့်တကွ အားလုံးသော မေးခွန်းအုပ်စုများ၊ မေးခွန်းများ၊ မေးခွန်းခွဲများ၊ အဖြေများနှင့် မေးခွန်းအချိတ်အဆက်များ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။	 Details
ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင် ဤစစ်တမ်းနှင့်တကွ အားလုံးသော မေးခွန်းအုပ်စုများ၊ မေးခွန်းများ၊ မေးခွန်းခွဲများ၊ အဖြေများနှင့် မေးခွန်းအချိတ်အဆက်များ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
2020-10-20 12:27:36 GMT
Are you really sure you want to *delete* some incomplete answers and reset the completed state of both answers and tokens?	 မပြည့်စုံသော အဖြေများ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပြီး အပြည့်အစုံဖြေပြီးသော အဖြေများနှင့် တုံကင်များအားလုံးကို အသစ်ပြန်စရန် သေချာပါလား။	 Details
မပြည့်စုံသော အဖြေများ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပြီး အပြည့်အစုံဖြေပြီးသော အဖြေများနှင့် တုံကင်များအားလုံးကို အသစ်ပြန်စရန် သေချာပါလား။
2020-10-20 12:30:04 GMT
Version:	 ဗားရှင်း -	 Details
2020-10-20 12:30:14 GMT
Do you want to delete this response?	 ဤစစ်တမ်းအဖြေကို ဖျက်ပစ်ချင်တာ သေချာပါသလား။	 Details
ဤစစ်တမ်းအဖြေကို ဖျက်ပစ်ချင်တာ သေချာပါသလား။
2020-10-20 12:30:43 GMT
The file is not compatible with this LimeSurvey version.	 ဤ ဖိုင်သည် ဤ Lime Survey ဗားရှင်းဖြင့် ကိုက်ညီမှု မရှိပါ။	 Details
ဤ ဖိုင်သည် ဤ Lime Survey ဗားရှင်းဖြင့် ကိုက်ညီမှု မရှိပါ။
2020-10-20 12:31:36 GMT
An error happen when try to submit your response.	 သင်၏ စစ်တမ်းအဖြေကို ပေးပို့နေစဉ်အတွင်း အမှားအယွင်းတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။	 Details
သင်၏ စစ်တမ်းအဖြေကို ပေးပို့နေစဉ်အတွင်း အမှားအယွင်းတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။
2020-10-20 12:32:18 GMT
This response was already submitted.	 ဤစစ်တမ်းအဖြေသည် ပေးပို့ထားပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။	 Details
ဤစစ်တမ်းအဖြေသည် ပေးပို့ထားပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။
2020-10-20 12:32:54 GMT
Update available	 အဆင့်မြှင်တင်မှု ရရှိနေပါပြီ။	 Details
2020-10-20 12:33:36 GMT
Security update available	 လုံခြုံရေး အဆင့်မြှင်တင်မှု ရရှိနေပါပြီ	 Details
လုံခြုံရေး အဆင့်မြှင်တင်မှု ရရှိနေပါပြီ
2020-10-20 12:33:56 GMT
Lowercase characters and digits, starting withacharacter - length from6to 60 characters	 အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အသေးများ၊ ဂဏန်းများသာ၊ အက္ခရာဖြင့် စတင်ရမည်၊ စာလုံးရေ ၆ ခုမှ ၆၀ ခုအတွင်း ရှိရမည်	 Details
အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အသေးများ၊ ဂဏန်းများသာ၊ အက္ခရာဖြင့် စတင်ရမည်၊ စာလုံးရေ ၆ ခုမှ ၆၀ ခုအတွင်း ရှိရမည်
2020-10-20 13:15:23 GMT
Options	 ရွေးချယ်စရာများ	 Details
2020-10-20 13:15:49 GMT
Select variation:	 မူကွဲကို ရွေးချယ်ပါ	 Details
2020-10-20 13:16:12 GMT
Select font:	 စာလုံးဖောင့် ရွေးပါ -	 Details
စာလုံးဖောင့် ရွေးပါ -
2020-10-20 13:16:27 GMT
Set Access-Control-Allow-Origin header:	 Access-Control-Allow-Origin header သတ်မှတ်မည် -	 Details
Access-Control-Allow-Origin header သတ်မှတ်မည် -
2020-10-20 13:17:41 GMT